Ilaah sanduuq, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Immisa qof - Masiixiyiin iyo kuwa aan Masiixi ahayn - ayaa leh Ilaah hal sanduuq? Gelinta Ilaah sanduuq waxay ka dhigan tahay inaan u maleyno inaan ognahay doonistiisa, dabeecadiisa iyo dabeecadiisa. Waxaan gelinaa qaanso korka sanduuqa markaan u maleyno inaan fahamno sida ay u shaqeyso nolosheena iyo dhammaan aadanaha.
Qoraaga Elyse Fitzpatrick wuxuu ku qoray buuggeeda "Gods of the Heart", jaahilnimada doonista Eebbe iyo khaladka ku saabsan dabeecadda Eebbe waa laba arrimood oo daran oo sanam caabuda. Aniguna waxaan ku dari karaa: Kuwani waa kuwa keena dhibaatooyin badan oo dadku ka qabaan diinta iyo nolosha. Jaahil iyo khalad waxay noo horseedaan inaan Eebbe ku rido sanduuq.
Ma doonayo inaan bixiyo tusaalooyin sababtoo ah Ilaah iyo aniga waxaan wada ogsoonahay in aniga iyo kaniisaddeyda aan halkaas joognay oo aan sidaas qabannay. Waanan hubaa ilaa aan ka aragno Ilaah fool ka fool weligeen awood uma yeelan doonno inaan ruxno jaahilnimada iyo qaladka u muuqda inay qayb ka yihiin xaaladda aadanaha.
Waxaan doorbidayaa inaan xooga saaro sidii loo furi lahaa qaansada, meesha looga saari lahaa cajaladda, meesha looga saaro waraaqda xirxirka oo aan u furo sanduuqa. Qaadi qaansada - barto dabeecadda Eebbe. Waa ayo Waa maxay astaamaha iyo dabeecaddeeda? U oggolow isaga inuu naftiisa ku muujiyo Qorniinka. Ka saar cajaladda - wax ka baro ragga iyo dumarka Kitaabka Quduuska ah. Salaaddee buu uga jawaabay iyaga sideese? Tuuji fur buugga xirmada - fiiri noloshaada si aad u ogaato waxa uu doonay iyo sida uu u qaabeeyey noloshaada. Shaki la’aan, qorshihiisu wuu kaa duwanaa kanaga.
Sanduuqa fur - aqoonso oo si furan u qiro inaadan aqoon wax kasta iyo kaniisaddaadu aysan waxwalba ogayn. Igu soo celi mar kale: Ilaah waa Ilaah oo ma ihi. Sababtoo ah baahiyadeena, damacyadeena iyo dabiicaddeena hoos u dhacday awgeed, innaga oo ah bini'aadamka waxaan u leenahay u-abuuray abuurista muuqaalkeena. Iyada oo loo adeegsado fikradeena iyo fikradaheena waxaan u qaabeyneynaa si waafaqsan rabitaankeena ama baahiyadeena si ay ugu habboon tahay duruufahaheena gaarka ah.
Laakiin aan u furnaano hagista iyo waxbarista Ruuxa Quduuska ah. Isaga oo caawimaad leh waxaan ku burburin karnaa sanduuqa oo aan u oggolaanno inuu Ilaah noqdo.